ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ရှုံချ လိုက်တဲ့ ဦးကောင်းကျော် – XB Media Myanmar
မန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ ထိုင်မသိမ်း အင်္ကျီကို ဖျက်စီးပြစ်တယ်ဆိုပြီး ကျော်ကျော်နန္ဒအား လူရွှင်တော် ဦးကောင်းကျော် ဝေဖန်ရှုံချ
လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေဖန်မှုတွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီး လူသိများလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ မှ…
Taro miss ပြိုင်ပွဲ ပွဲတတ် သီချင်းဆို ဖက်ရှင်က ဒီဇိုင်နာဇင်လင်းထက် မိတ်ကပ် ဂရေ့ဒေါ်နား ဒီထက်လန်းတဲ့ ဖက်ရှင် သီချင်းတွေနဲ့ 31-8-2019 မန်းလေး Htet YatiLwin group ကလုပ်တဲ့ ုမြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု miss ပြိုင်ပွဲမှာ ရှိပါမယ် လက်မှတ်ဝယ်ယူ လိုသူများ နှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းရှင်းများ ဒီဖုန်းလေးတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ 09400400010- – 09763300315 ဆိုပြီး ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ဖော်ပြထားမှု နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ထိုင်မသိမ်း အင်္ကျီ ဖြင့် ဒီဇိုင်းအသစ်ထွင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဖြင့် သီချင်းဆို ဖျော်ဖြေထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ လူမှုကွန်ယက်မှာ တက်လာပြီး ဝေဖန်မှု အများအပြား ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဝတ်စုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူရွှင်တော်ကြီး ဦးကောင်းကျော်မှ ပြင်းထာန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
“ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချပါသည်။ငါ့ညီ ???? ရေ မင်းဝတ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလဲပြန်ကြည့်ပါဦးကွာ တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်အသား ထိုင်မသိမ်း အကျီ ၤကို အခုလိုကြီး ဖျက်စီးပြစ်တဲ့ မင်းဟာ မြန်မာစစ်စစ်တစ်ယောက်ရောဟုတ်ပါရဲ့လား လို့မေးပါရစေ ????
ဆန်းသစ်တီထွင်ချင်ရင်လဲ လူမျိုးနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မထိခိုက် မနစ်နာ စေတဲ့ ဆန်သစ်မှုမျိုးကို ရှာဖွေပါလားကွာ ။
အခုတော့ မင်းလုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ ဒီစာကိုထရေးမိတာဘဲ ။
အနုပညာသမား လို့ မင်းကိုယ်မင်းခံယူ ထားတာ ဆိုရင်တော့ အခုလို့ လူမျိုးနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်သွားစေမဲ့ ပေါက်လွှတ်ပဲစား အောက်တန်းဆန်ဆန် လုပ်ရပ်မျိုးတွေနဲ့ နာမည်မကြီးချင်ပါနဲ့ကွာ ။
မင်းလုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် မဟုတ်တာတွေကိုမှအတုခိုးတတ်ကြတဲ့ အခုခေတ် လူငယ်မျိုးဆက်တွေက မင်းလိုဘဲ ကိုယ့်ရိုးရာဝတ်စုံကို တန်းဖိုးမထားတတ် ဘဲဖြစ်ကုန်ရင်တော့ ??? စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ???
လူကျင့်ဝတ်အရ နာမည်ထည့်မရေးတာ နော်…မြန်မာတို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထိုင်မသိမ်း ဝတ်စုံအား ယခုကဲ့သို့ သရုပ်ပျက် ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့် ထိုသရုပ်ဆောင် မဟုတ် ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် ဆိုသူအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါသည်။
ကောင်းကျော် – လူရွှင်တော်” ဆိုပြီး ပြင်းထာတ်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်လေးတွေကိုလည်း ကွန်မန့် မှာ ရေးသားဖော်ပြပေးကြပါဦး။။
“ထိုင်ရှိခိုးပါတယ် ညညလန့်နိုးလို့ ပုံမတင်ပါနဲ့တော့ဗျာ” ဆိုပြီးစိုးပြည့်သဇင်ကို စနောက်လိုက်တဲ့ဟိန်းဝေယံ